तपाईंको हातमा पैसा टिक्दैन भने यि ४ उपाय गर्नुहोस् – Sandesh Munch
तपाईंको हातमा पैसा टिकाउने अचुक उपाय यस्ता छन् । १) तपाईंको कमाई कम तर खर्च ज्यादा हुन्छ भने तपाईंलाई महिनाको अन्त्यमा साथीबाट ऋण लिने बाध्यता हुन्छ । त्यसैले आफ्नो खर्चको मनिटरिङ गर्न सुरु गर्नुहोस् । तपाईं आवश्यकता अनुसार मात्रै खर्च गर्नुहोस् ।
Prevयी चिजलाई सिरानीमुनी राखेर सुत्नुस् भाग्य चम्किन्छ?
Nextआयो खुशीको खबर! भाकल मागेमा मनोकांक्षा पूरा हुने तनहुँको छाब्दी बाराही मन्दिर